Somali News 09.29.21 | KWIT
Toddobaadkii labaad oo xiriir ah, 81 qof oo kale oo reer Iow ah ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen COVID-19 usbuucii la soo dhaafay. Tani waxay tirada guud ee dhimashada ka dhigaysaa in ka badan 65 boqol.
Gobolku wuxuu soo sheegayaa 624 Iowans oo hadda isbitaal la dhigay fayraska. Taasi waa waxoogaa hoos u dhac ah tirada toddobaadkii hore.
Sida laga soo xigtay CDC, 63 boqolkiiba Iowans 12 iyo ka weyn ayaa si buuxda loo tallaaley.
Fasalladu waxay u guureen khadka tooska ah ee ardayda Kulliyadda Qabiilka Little Priest ee Winnebago, Nebraska ka dib markii ay kordheen kiisaska COVID-19.
Warbixin isbeddel toddobaadle ah oo COVID-19 ah ayaa muujineysa isbitaal dhigid sare oo ku taal Sioux City labada xarumood ee caafimaad ee waaweyn. Tirada dadka u dhintay dhibaatooyinka fayraska ayaa kordhay lix marka la isku daro 239 ee Degmada Woodbury tan iyo bilowgii Faafida.
Waxaa jiray 506 kiis oo cusub oo lagu daray toddobaad gudihiis, oo hoos uga dhacay 35 marka loo eego toddobaadkii hore. Afartan iyo shan boqolkiiba dadka deggan Degmada Woodbury ayaa si buuxda loo tallaaley taas oo ahayd korodh .5% ama 500 qof oo dheeraad ah.
Marka laga hadlayo isbitaal-dhigista waxaa jiray 42 bukaan oo laga helay cudurka togan iyadoo 30 ay la dagaallameen COVID-19 oo keliya. Taasi waxay ahayd boodbood boqolkiiba 50 hal toddobaad gudaheed.
Heerka fiicnaanta imtixaanka 14-ka maalmood ah waa 16%, taas oo muujinaysa fiditaanka bulshada sare.
Xogta ay sii daayeen saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ahi waxay muujineysaa heerka ugu sarreeya ee waxyeellada dadka da'da yar ee degmada, gaar ahaan dadka jira 50 iyo wixii ka yar, oo ay ku jiraan kuwa 17 iyo wixii ka yar.